IJacaranda Aces iyijonge ngamehlo abomvu indebe yeLFA – Grocott's Mail
You are at:Home»SPORT»IJacaranda Aces iyijonge ngamehlo abomvu indebe yeLFA
By Grocott's Mail Contributors December 1, 2019 1 Comment1 Min Read
Lelethu Mini of City Pirates takes on Vuyani Skeyi of Maru in their SAB clash on Saturday 23 November at Fiddlers Green. Photo: Sue Maclennan
Imozulu ebizole nasebukhweni bezinja ngoMgqibelo evele yajika kakubi njengotywala esuswini, yenze kwanzinyana kubalandeli bebhola nakubadlali ngokubanzi.
Kwimidlalo yeMakana LFA yoompondo zihlanjiwe IAttackers ihlaze iCameroon ngamanqaku alishumi kwamabini, logama yona iNewtown City ibhungce ngenqaku elinye eqandeni kwiNewseekers.
NgeCawa iRhodes ibethe iYoung Eagles ngamanqaku amabini kwelinye yaze yona 6Sai Army yahlutha intlaka emlonyeni weAttackers ngamanqaku amathathu kwamabini.
INew Seekers iye yajika izinto ngethuba ibhaxabula iJoza Callies ngamanqaku amane kwelinye logama iGrahamstown United ethande ungeva mvanje ibethe iNewtown City ngamathathu kwamabini.
ILove and Peace ibambene ngenqaku neCameroon yaze yona iSophia Stars yathibaza iJacaranda Aces ejonge lendebe ngamehlo abomvu ngethuba ebambana ngenqaku elinye macala lamaqela.
Kwimidlalo yeSAB ngoMgqibelo iMakana Pillars ibethwe ngamanqaku amahlanu kwelinye yiManchester United yase Mnyameni logama yona iMaru iqushe yabhulela oogqirha nezicaka iCity Pirates kwidabi lalapha ekhaya ngamanqaku amathandathu eqandeni.
Previous ArticleEP Rural unbeaten at CSA Coastal Week
Next Article Delays darken NGOs’ future